Ifomathi yeVidiyo ye-Instagram Abalandeli ▷ ➡️
Ifomathi yevidiyo ye-Instagram
NgoJanuwari 31, 2019 0 IiCententarios 1431
Kuyo yonke kuyinyani ukuba iqonga ledijithali Youtube Ungukumkani weevidiyo. Nangona kunjalo, i-Instagram isetyenziswa ngokubanzi ukulayisha olu hlobo lomxholo. Ngenxa yoko, izigidi zeevidiyo zidlalwa yonke imihla kule nethiwekhi yoluntu, nokuba kushicilelo okanye kumabali. Kungenxa yoko, ukuba uyakhuthazwa ukuba wenze enye, ke kuya kufuneka uyazi yonke into malunga nefomathi yevidiyo ye-Instagram. Kwakhona, ukuba umxholo wakho kukukhuthaza inkampani okanye iimveliso zakho, ngesizathu esingakumbi ziya kuba yimpumelelo.
Ngapha koko, ezi vidiyo ze-Instagram zibalaseleyo cwangciso so urhwebo isetyenziswa ziinkampani ezininzi okwangoku. Ngokunjalo, kukhona abasebenzisi abaninzi abaphumeza ukuthandwa kwabo ngenxa yevidiyo ezilayisha kweli qonga. Ngolo hlobo, ulwazi olucacileyo kwi Ifomathi kunye neempawu zayo, ukuyifaka kamva ividiyo yakho, iya kuba luncedo kakhulu.
Iimpawu zevidiyo ze-Instagram
Izinto ezirekhodiweyo kweli qonga, zineempawu omele wazi ngaphambi kokuba uqhubeke nazo Ifomathi yevidiyo ye-Instagram.
Unokukhetha ukurekhoda ngqo kwisicelo, into leyo ayenzeki nakweminye imidiya yoluntu. Ukongeza, kukuvumela ukuba urekhode eziliqela umboniso Kwividiyo enye.
Ungasebenzisa nayiphi na Iifilitha ze-23 ezikunika zona.
Kwimeko apho ividiyo ihlala ixesha elide kunemizuzwana ye-60, unako yinqumle kwiqonga elinye Ukucinezela i-ayikhon icon.
Isicelo ngokwaso sivumela ukuba ukhethe umfanekiso wokukhusela kwaye wenze okanye ukhuphe isandi ngaphambi kokushicilela.
Nje ukuba sizazi iimpawu zokurekhodwa, sinokuqala ngefomathi. Siyakuxelela nawe Ungazenza njani uthandwe ngala magama e-Instagram.
Amanyathelo eevidiyo ze-Instagram
Unemizuzwana engama-60 yokufumana wonke umxholo kubalandeli bakho. Kukwacetyiswa ukuba ubonelela ngemveliso okanye uphawu, ubude bexesha ungadluli kwimizuzwana ye-30, kuba emva kwelo xesha kunciphisa ukuthotyelwa kwengqondo yabantu. Kodwa ukuba iividiyo zakho zivela Izihloko ezifanelekileyo kakhulu, amaphulo aveliswe kakuhle okanye iiakhawunti ezihlekisayo, unakho ukonwaba Sebenzisa ixesha elininzi
Ngokukwanjalo, imilinganiselo ekufuneka urekhodo lwakho lube nayo Iiphikseli ezingama-640 × 640, nangona unakho ukhetho lokwenza i-panoramic yakho yevidiyo. Kule nto, konke ekufuneka ukwenzile kukuchukumisa i icon eyenzelwe ukuhlonipha ifomathi yentsusa xa uza kuyilayisha. Ngapha koko, ubukhulu becala banokulinganisa iividiyo zakho yi-15 MB okanye i-20 MB, enkulu kunokuba, i-Instagram ayiyi kukuvumela ukuba uyilayishe
Imilinganiselo yeividiyo zebali le-Instagram
Kule meko ixesha lifutshane, unayo kuphela Imizuzwana ye-10 ukuthumela ividiyo kumabali. Yiyo loo nto kufuneka unike ngokuthe ngqo kwaye kube lula ukuqonda umyalezo. Ngenxa yoko, eyona nto ilungileyo kwezi vidiyo kukutsala umdla kubalandeli bakho. Kwaye oku, imilinganiselo ofanele uyisebenzise Iiphikseli ezingama-750 × 1334.
Siyakuxelela nawe indlela yokwenza imali nge-Instagram.
Ifomathi yevidiyo ye-Instagram TV (IGTV)
Ukwenza lo msebenzi, uya kuba nalo ukubakho kokufaka urekhodo phakathi kwemizuzwana ye-60 kunye nemizuzu ye-10 yeeakhawunti ezingangqinisiswanga okanye ukuya kuthi ga kwimizuzu ye-60 ukuba i-akhawunti yakho iqinisekisiwe. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubukele ividiyo ye-Instagram fomathi.
Ifomathi ethe nkqo: Unokusebenza ngqo nefowuni yakho ngokuthe nkqo okanye ukurekhoda ngokuthe tye emva koko uyitshitshise ngesixhobo sevidiyo esinjenge "QuickTime". Ungayenza ngokurekhoda isikrini kubungakanani obuchanekileyo nge "Camtasia" okanye "Adobe Premiere".
Uhlobo lwefayile: MP4
Ubudlelwane: 9: 16
Imilinganiselo ye-IGTV: I-1128px x 2008px.
Ubuncinci bereyithi yesakhelo: I-30 FPS.
Ubungakanani beevidiyo ukuya kuthi ga kwimizuzu ye-10: I-650 MB
Ubungakanani beevidiyo ukuya kuthi ga kwimizuzu ye-60: 3,6 GB.
Iingcebiso zokwenza ividiyo yakho iphumelele
Ezi ngcebiso zinokuba zeenkampani zakho okanye zophawu, njengomsebenzi wakho njengoko nefuthe Kwiintanethi zentlalo.
Chaza injongo yakho
Okokuqala ngaphambi kokupapasha umxholo, zibuze lo mbuzo: "Yintoni endifuna ukuyifumana ngokufaka iividiyo ku-Instagram?". Nje ukuba ufumane impendulo, ungaqala ukuchaza isicwangciso sakho sevidiyo ukuthengisa Ngokufanayo, Uya kuba nomyalezo ucacile ukuba ufuna ukuya kubalandeli bakho.
Yenza imidiliya ekhethekileyo ye-Instagram
Ukulandela isicwangciso sakho se ukuthengisa, iividiyo ozifaka kwiYouTube nakwi-Facebook okanye zinokufana ngokufanayo Instagram, isizathu silula. Imizuzwana ye-60 le sicelo ikunika yona yeyokuba ukholelwe umxholo othusayo, obonakalayo obambe umbukeli kwaye uthathe ithuba ukusuka kwi-0 yesibini de iphele.
Yenza amaphulo akhethekileyo
Kwakhona, sebenzisa amathuba kwezinye usuku olukhethekileyo oko kukuvumela ukuba uphumelele ukubonakala y yongeza i Nxaxheba ukuphucula iziphumo.
Ngeli xesha, ukusetyenziswa kwe-hashtags yinto yakho iya kunceda abantu ukuba babone. Ke, khangela kwaye ujonge imeko kwaye uzame ukuzisebenzisa kwiividiyo zakho ukuba zibalulekile.
Okokugqibela, xa upapasha iividiyo zakho Instagram, uya kuba nakho ukuqaphela ukuhlangana, ubungakanani bembonakalo kunye nezimvo abaye banazo. Ngale ndlela, izakuba que ukulinganisa into abaphulaphuli bakho abayithanda kakhulu kwaye uqhubeke kuloo ndlela.
Kwaye wena, Ngaba sele uyazi ukuba ungathengisa njani kwi-Instagram?
1 Iimpawu zevidiyo ze-Instagram
2 Ifomathi yevidiyo ye-Instagram
2.1 Amanyathelo eevidiyo ze-Instagram
2.2 Imilinganiselo yeividiyo zebali le-Instagram
2.3 Ifomathi yevidiyo ye-Instagram TV (IGTV)
3 Iingcebiso zokwenza ividiyo yakho iphumelele
3.1 Chaza injongo yakho
3.2 Yenza imidiliya ekhethekileyo ye-Instagram
3.3 Yenza amaphulo akhethekileyo
3.4 Sebenzisa ii-hashtag
3.5 Imilinganiselo yeziphumo
Ifomathi ethe nkqo ye-Instagram
Ungazisebenzisa njani ezona zenzo zintle zenethiwekhi yoluntu